>တိမ်ဝှက်တဲ့လမင်း | ချမ်းလင်းနေ
Filed under: ကဗျာလေးတွေ — 12 Comments	March 27, 2010
လသာတဲ့ညမှာ ငါကျရှုံးခဲ့တယ်။ငါကမှနေရဲရဲ သေရဲရဲ မဟုတ်တာ။
မာန်ပျိုတံခွန် လွှင့်ထူလို့ဖန်တရာ ထပ်အောင်ပွေးခဲ့တယ်။ဒီသံသရာ အချစ်ကျော့ကွင်းမှာဝပ်ဆင်းကာမျော။
ရမက်ကြောင့်ရလဒ်အပြစ်ကြောင့် ဒဏ်ခတ်ခံရတယ်ဘယ်ညာပြန် ကြောမဆန့်နိုင်အောင်တိမ်သွားတဲ့လမ်းမှာလမင်းကို ကာစင်တင်ကြိုးပေးသတ်တယ်ဒီတကြိမ်လည်း သေရပြန်ရော။
12 Comments: လင်းကြယ်ဖြူ
March 27, 2010 at 5:05 pm	>နေရဲရဲ သေရဲရဲ….တိမ်ဝှက်တဲ့ လမင်း ..မလင်းတစ်လင်းမို့…ပြစ်ဒဏ်တွေကြား …ကျဆုံးသွားသတဲ့…း )ခံစားချက် အပြည့်ပါတဲ့ မော်ဒန်ဆန်ဆန် ရသ လေးကို လာခံစားသွားကြောင်းပါ.ခင်ဗျား…ပျော်ကြပါစေ*.*.*
March 27, 2010 at 5:08 pm	>ကိုချမ်းရေ ကဗျာနုနုလေး လာဖတ်တယ်ဗျို့.. ကဗျာခေါင်းစဉ်ကအစ လှတယ်။
March 27, 2010 at 5:41 pm	>ကဗျာလေးလာဖတ်သွားပါတယ်။
March 27, 2010 at 8:02 pm	>ငါက နေရဲရဲ သေရဲရဲမှ မဟုတ်တာ ။ရမက်ကြောင့်ရလဒ်အပြစ်ကြောင့် ဒဏ်ခတ်ခံရတယ်။အဲ့ဒီ စာသားလေးတွေက လူကို ထိတယ်ဗျာ…။
March 27, 2010 at 9:43 pm	>ရမက်ကြောင့်ရလဒ်အပြစ်ကြောင့် ဒဏ်ခတ်ခံရတယ်ဘယ်ညာပြန် ကြောမဆန့်နိုင်အောင်တိမ်သွားတဲ့လမ်းမှာလမင်းကို ကာစင်တင်ကြိုးပေးသတ်တယ်ဒီတကြိမ်လည်း သေရပြန်ရော။ကောင်းလိုက်တဲ့ အရေးအသားပဲ ကိုချမ်း …ကဗျာကို တော်တော်ခိုက်သွားတယ် …ခင်တဲ့ညရဲ့ကောင်းကင်
March 27, 2010 at 10:15 pm	>ကိုချမ်းရေ…..ပျောာက်နေတာ အတော်ကြာ…..။ပေါ်လာပြန်တော့လည်း ကဗျာကောင်းလေးတစ်ပုဒ်နဲ့…။“လမင်းကို ကားစင်တင်ကြိုးပေးသတ်တယ်ဒီတကြိမ်လည်း သေရပြန်ရော”…..အရမ်းမိုက်တယ်………း))ခင်မင်တဲ့ဏီလင်းညို
March 27, 2010 at 10:17 pm	>လာခံစားသွားပါတယ် ကိုရေချမ်းရေမတွေ့တာတောင် ကြာပြီနော် နေကောင်းပါရဲ့လား
March 28, 2010 at 12:57 am	>နေရဲရဲ သေရဲရဲ….တိမ်ဝှက်တဲ့ လမင်း ..မလင်းတစ်လင်းမို့…ပြစ်ဒဏ်တွေကြား …ကျဆုံးသွားသတဲ့…း ထိချင်ပြင်းလွန်းပါလားဗျာ
March 28, 2010 at 1:30 am	>တိမ်တွေလည်း ကြာကြာ မဝှက်နိုင်ပါဘူးလေ..တစ်နေ့နေ့တော့ သာ ရမှာပဲ မဟုတ်လား..။
March 28, 2010 at 2:10 am	>တိမ်သွားတဲ့လမ်းမှာလမင်းကို ကာစင်တင်ကြိုးပေးသတ်တယ် …အားးးးးး ဒီလိုအတွေးမျိုး အကိုချမ်းရေစကားလုံးစဉ်းစားမရခဲ့ဘူး……ကဗျာထဲမှာ ခံစားချက်တွေ အများကြီးတွေ့ရတယ်..
Reply	khun thadar
March 28, 2010 at 9:33 am	>ကဗျာလာဖတ်သွားပါတယ်အစ်ကိုရေ…ပျောက်နေတာ အတော်ကြာသွားပြီ။လယ်တွေစိုက်တာ သူဌေးဖြစ်သွားလို့ဘလော့ပြန်ရေးတာလား..းPပျော်ရွင်ပါစေခွန်သဒ္ဒါ
March 29, 2010 at 10:50 pm	>ကဗျာ့စာသားထိချက်ကတော့ ပြင်းလွန်းတာဗျာ..။ကဗျာလာဖတ်သူ အားလုံးကိုလည်း ဟတ်ထိသွားစေတယ်…။ခင်မင်စွာဖြင့်မိုးငွေ့
« >ရင်တွင်းပြတိုက်ထဲက လမ်းပြကြယ်